विद्युतीय शवदहन-आधुनिक विकल्प | Himalkhabar.com
शनिबार , ४ जेठ २०७० गृहपृष्ठ | सम्पादकीय | प्रकाशकीय | आरएसएस
गृहपृष्ठ » विद्युतीय शवदहन-आधुनिक विकल्प विद्युतीय शवदहन-आधुनिक विकल्प
विरोधले काम रोकिएन भने डेढ वर्षा आर्यघाटमा विद्युतीय चिता तयार हुनेछ र त्यसबाट दैनिक हजारौं रुपैयाँको दाउरा, मासिक सयौं रूख र अन्ततः वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ । रमेश कुमार
शनिबार , २ असार २०६९ २:५३ पम
हिन्दू संस्कार अनुसार दाउराले शवदहन गर्ने परम्परालाई विद्युतीय शवदाह गृह (इलेक्टि्रकल क्रिमेटोरियम) को विकल्प दिने काम थालिएको छ । “दाउराले लाश जलाउने चलनलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने आधुनिक विकल्प अघि सारिएको हो”, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव सुशील नाहटा भन्छन्, “तीन दशक पुरानो यो योजना अब पूरा हुने भएको छ ।”
पशुपति क्षेत्रमा जमिन, जल र वायु प्रदूषण जटिल र गम्भीर बन्दै आएको छ, जसको एउटा प्रमुख कारण खुला रूपमा घण्टौं लगाएर लाश जलाउनु पनि हो । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर कोषले आर्यघाट दक्षिणतिरको खाली ठाउँमा विद्युतीय शवदाह गृहको जग हालेको छ । विद्युतीय शवदहन शुरू भएपछि जमिन, जल र वायु प्रदूषण क्रमशः घट्दै जाने कोषको विश्वास छ । यसका लागि रु.२ करोड ५९ लाखमा दुइ वटा मेसिन ल्याउन कोलकाताको इन्डोम्यान इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको जानकारी नाहटाले दिए । वातावरणकर्मीहरूले कोषको प्रयासको सराहना गरेका छन् ।
बाध्यता होइन विकल्प
आर्यघाटमा ‘अति विशिष्ट’ हरूका लागि छुट्याइएको एकसहित दाउराका १० वटा चिता छन् । विद्युतीय शवदाह गृह बनेपछि पनि तिनलाई बन्द नगरिने सदस्यसचिव नाहटाले बताए । यसको अर्थ आर्यघाटमा विद्युतीय शवदहन बाध्यता नभएर विकल्प मात्र हुनेछ । नाहटा भन्छन्, “र्सवसाधारणमा विश्वास जगाएर मात्र परम्परागत तरिका विस्थापित गर्ने हो ।” मृतकको शव नभेटिए कुश भए पनि जलाउनुपर्ने मान्यता रहेको समाजमा विद्युतीय शवदाह स्वीकृत हुन केही समय लाग्नसक्ने कोषका कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य बताउँछन् ।
शुरूमा दुइ विद्युतीय चिता रहने शवदाह गृह आवश्यक परे अर्को एउटा थप्न मिल्ने गरी बनाईंदैछ । दुइटा विद्युतीय चितामा दैनिक ४८ शव जलाउन सकिन्छ । आर्यघाटमा अहिले दैनिक ३० वटा लाशको अन्त्येष्टि हुँदै आएको छ । नाहटाका अनुसार, विद्युतीय चितामा १२०० ड्रि्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रम उत्पन्न भएर सामान्यतयाः ५५ मिनेटमा शव जलिसक्छ र अस्तु संकलन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय शवदहनमा अधिकतम रु.२५०० लाग्ने नाहटाको अनुमान छ । परम्परागत तरिकाबाट शव जलाउँदा कम्तीमा रु.५ हजार लाग्ने गरेको छ ।
दुइ वर्षघि ‘कलेज अफ एप्लाइड साइन्स’ -सिएएस) ले गरेको एउटा र्सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ८० प्रतिशत हिन्दू र ७७ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बीले विद्युतीय दाहसंस्कार उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । भारतको कोलकाता, मुर्म्बई लगायतका ठूला शहरमा विद्युतीय दाहसंस्कारको चलन बढिरहेको कोषका सदस्यसचिव नाहटा बताउँछन् । कोषले सनातन संस्कारको पनि ख्याल राखेर विद्युतीय शवदाह गृहको तयारी थालेको छ, जहाँ शवको अन्तिम संस्कार गर्ने कोठा र हल पनि हुनेछन् । शवदाह गृहसँगै करीब रु.९ करोडको लागतमा पार्किङ, किरियापुत्री भवन र भोजन-प्रसादी गृह पनि बनाइने नाहटाले बताए ।
परम्पराअनुसार दागबत्ती दिइसकेपछि विद्युतीय दाहसंस्कार हुने र अस्तु निकाल्न मिल्ने हुनाले हिन्दू धर्म-संस्कारको ज्ञान भएकाहरू यो विधिलाई सामान्य मान्दछन् । वाल्मीकि क्याम्पसका प्राध्यापक भवानी खतिवडा तेजको अर्को रूप विद्युत् पनि भएकाले यसलाई अवैदिक भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “अग्नि, विद्युत्, र्सर्ूय, चन्द्र आदि वेदमै उल्लेख भएका तेजहरू हुन्”, प्रा. खतिवडा भन्छन्, “त्यसकारण, विद्युतीय शवदाहलाई धार्मिक विधिविधानका दृष्टिले अशास्त्रीय भन्न मिल्दैन ।”
तीन दशकको प्रयास निष्प्राण शरीर नष्ट गर्न परम्परागत चिताको सट्टा विद्युतीय चिता प्रयोग गर्ने परिकल्पना करीब तीन दशकअघि तत्कालीन काठमाडौं नगरपञ्चायतले गरेको थियो, कमल चित्रकार प्रधानपञ्च हुँदा । विष्णुमती किनारको टेकुमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाइएको पनि थियो, तर ठूलो आकारको मेसिन ल्याइएकोले योजना नै असफल भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष वैद्य बताउँछन् ।
२० वर्षघि स्थापना भएको कोषले पनि विद्युतीय शवदाह गृहको पहल गरेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना २०५६ ले प्राथमिकतामा राखेपछि कार्यान्वयनमा आएको यस योजनाका लागि २०६२ मा ‘इलेक्टि्रक क्रिमेटोरियम’ मेसिनको बोलपत्र आहृवान र दर्ुइ वर्षघि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले शवदाह गृह सञ्चालन गर्न चाहिने २५० केभीए विद्युत् दिन सहमति जनाएको र त्यसबाहेक दर्ुइ वटा जेनेरेटरको प्रबन्ध गरिने सदस्यसचिव नाहटाले बताए ।
काठमाडौंमा दाउराको अभावका कारण पनि कोषले विद्युतीय शवदाह गृहमा जोड दिएको हो । कोहीकोही बेला आर्यघाटमा दाउराको निकै कठिनाई पर्छ । कोषलाई दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनमा हड्ताल हुँदा त्यसको सीधा असर आर्यघाटमा पर्न थालेपछि कोषले अहिले निजी व्यवसायीबाट दाउरा किनिरहेको छ ।
विरोध पनि शुरू कोषको विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजनाको विरोध पनि शुरू भइसकेको छ । शवदाह गृहको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँ स्थानीयवासीको घरसम्म पुग्ने भएकोले विरोध गरेको पिङ्गलास्थानका नवराज लामिछानेले बताए । उनले वागमती पुल नजिकै पर्ने शवदाह गृह पर्यटकीय र व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने तर्क गरे । भारतीय शहरका शवदाह गृहहरूको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेका कोषका सदस्यसचिव नाहटा मूल सडकबाट ८० मिटर टाढा रहने शवदाह गृहको चिम्नीबाट गन्धरहित सेतो धुवाँ मात्र निस्कने बताउँछन् । “त्यसमाथि चिम्नीमा जडान हुने प्रदूषण मापन यन्त्रमा प्रदूषणको संकेत देखिनासाथ नियन्त्रण गरिनेछ”, नाहटा भन्छन् । उनले भवन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी बनाउन लागेको र यसको नक्सापास पनि नगरेको भन्ने पिंगलास्थानवासीका आरोपको पनि खण्डन गरे ।
तर, स्थानीयवासीको विरोध साम्य भएको छैन । दइ साताअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको छलफलपछि उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रभाव न्यूनीकरण गरेर निर्माण अघि बढाउन दिएको सुझावमा पनि स्थानीयवासी सन्तुष्ट छैनन् । नवराज लामिछाने भन्छन्, “स्थानीयलाई असर पर्ने संरचना बनाउन कुनै हालतमा दिंदैनौं ।”
kasle nadine…? bikas ko badhak haru lai tehi chimni bata niskiyeko dhuwako kalo moso dalnu parchha… ki kaso?
साउदी महिला सगरमाथा शिखरमा
एकल पहिचानले देश समाप्त हुनेः गौतम
इन्टरनेटमा नेपाली पुस्तक पसल
सरकारसँग वार्ता नगर्ने आन्दोलनरत दलको निर्णय
एमाले नेता नेपाल इन्डोनेसिया प्रस्थान
एकता महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पारित
थ्रेसहोल्ड जरुरी छः रायमाझी
सन्तान वियोगमा आजन्म घायल
सदभावना अध्यक्ष महतोद्वारा अनशन बस्ने घोषणा
लज्जास्पद निर्णय (विस्तृत)
विदेशमा बिकेको सीप-र्याफ्टिङ
४४ लाख नागरिकताविहीन
माओवादी हिंसा: दुःस्वप्नबाट बाहिरिंदै
हरिवंश र देवता
हिमाल राष्ट्रिय जनमत सवक्षर्ण २०६९ (II)
रमझम / खेलकुद अर्थ
Copyright © 2013 Himalkhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal